कांग्रेसमा यसरी लोकप्रिय बन्दै युवा नेता मीनकृष्ण !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कांग्रेसमा यसरी लोकप्रिय बन्दै युवा नेता मीनकृष्ण !
ललितपुर – मीनकृष्ण महर्जन नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता मानिन्छन् । २०४६ सालको दोस्रो जनआन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेसको सदस्य लिई राजनीति सुरू गरेका महर्जन नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् ।
महर्जन ११ औं महाअधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै १२ औंमा महासमिति सदस्य र १३ औंमा महासमिति सदस्य भए ।
२०५७ सालमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सचेतक पूर्व रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा महर्जनको लोकप्रियता देखेर केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे । त्यसपछि २०६० सालमा चितवनमा भएको तरुण दलको केन्द्रीय अधिवेशनमा महर्जन केन्द्रीय सदस्य खुल्लातर्फ अत्याधिक मतले विजय भए ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनपछि महर्जन तरुण युवाहरूको नेतृत्व गरी आफ्नो जीवन दाउमा राखेर प्रत्येक दिन आन्दोलनमा होमिइरहे । महर्जन कराँतेका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व कोषाध्यक्ष समेत हुन् । महर्जनले १ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरेका छन् । त्यसैले महर्जन खेलकुदमा पनि लेजिनको रुपमा परिचित छन् ।
२०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महर्जनलाई तरुण दलले काठमाडौं उपत्यका इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो । महर्जनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हजारौं तरुण युवाहरू र खेलाडीहरू परिचालन गरेका थिए ।
महर्जनको लोकप्रियता देखेर नेपालमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली पश्चात नेपालमा पहिलो संविधानको चुनावमा महर्जनलाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार सिफारिस गरियो । पछि पार्टीभित्र ६०/४० को भागबण्डाका कारण महर्जन टिकटबाट वञ्चित भए ।
महर्जनले कांग्रेस र खेलकुदमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६६ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कोषाध्यक्षका लागि पार्टीबाट सिफारिस गरे र कोषाध्यक्ष पनि भए । २०६८ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदा महर्जनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । त्यसपछि महर्जन निरन्तर पार्टीको संगठन विस्तारमा लागिपरेका छन् ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि महर्जनको ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट सिफारिस भयो । नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्डमा टिकटको लागि महर्जन नाम प्रस्ताव भएको थियो । अन्तिममा आएर महर्जनको लोकप्रियता देखेर जनजातिको हिसाबले समानुपातिकमा राख्ने मौखिक सहमति भयो ।
महर्जनको लोकप्रियता देखेर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निकै रुचाउँछन् । अझ प्रभावशाली नेता स्व. खुमबहादुर खड्काले महर्जनलाई छोरा जस्तो माया गर्थे । महर्जनलाई कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंह लगायतले पनि निकै रुचाउँछन् ।
नेपालमा संघीयता लागू भएपश्चात् २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचान र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महर्जनलाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट नेपाली कांग्रेसबाट टिकट दिएको थियो । महर्जनको लोकप्रियताको कारण कम्युनिस्टहरूले पनि हार्ने आकलन गरेका थिए । पछि प्रदेशमा कम्युनिस्टले सामदाम दण्डभेद लगाएर कांग्रेसकै नेताहरूलाई पैसाको प्रलोभनमा पारी कांग्रेसकै नेताहरूलाई पैसामा किने । त्यति गर्दा पनि महर्जन झिनो मतले पराजित भए ।
महर्जन भन्छन्, ‘मलाई त कम्युनिस्टहरूले हराउनै सक्दैन । मलाई त आफ्नै पार्टीका केही नेताहरू पैसा र बाइकमा बेचिएर आफ्ना नातागोतालाई सूर्यमा भोट हाल्न लगाए । त्यो प्रमाण मसँग अहिले पनि सुरक्षित छ । हाम्रो क्षेत्रमा एकथरि नेता यस्ता छन्, नेपालमा प्रजातन्त्र पश्चात् अहिलेसम्म रुखमा भोट हालेको छैन । ३६४ दिन कांग्रेस, चुनावको दिन अर्कै पार्टी । यस्ताहरूले गर्दा नै पार्टी कमजोर भइरहेछ ।’
१९९९ मा नेपालमा भएको आठौं साफ खेलमा महर्जन कराँतेका कोच थिए । त्यतिबेला नेपालले कराँतेमा १४ वटा स्वर्ण पदक ल्याएको थियो । कराँतेमा ऐतिहासिक सफलता पश्चात महर्जनलाई तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् संरक्षक स्व. युवराज दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।